दसैंको दक्षिणाले किनेको महत्वपूर्ण कुुरा के हो ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः आश्विन २८, २०७५ - साप्ताहिक
दसैंको दक्षिणाले किनेको महत्वपूर्ण कुुरा के हो ?
पहिले–पहिले मलाई दसैंको दक्षिणा लिन लाज लाग्थ्यो । म आफूले पाएको दक्षिणा धेरैजसो ममीलाई दिन्थें । केही पैसाले आफूलाई आवश्यक सामान किन्थें । त्यसमध्ये मैले दसैंको दक्षिणाबाट एउटा नोट बुक किनेको याद छ ।
टिका प्रसाईं, गायिका
अहिलेसम्म दसैंमा पाएको दक्षिणाले त्यस्तो केही किनेको सम्झना छैन । त्यो पैसा त तास खेलेरै सिध्याउँछु ।
आँचल शर्मा, अभिनेत्री
सानो छँदा दसैंको दक्षिणा जम्मा गरेर कपडा किन्थेँ । पछि अलि ठूली भएपछि मैले दक्षिणाको पैसाले सुनको सिक्री बनाएकी थिएँ ।
दसैंको दक्षिणाले मैले किनेको महत्वपूर्ण कुरा एउटा कुखुराको चल्ला हो, त्यो पोथी रहेछ । त्यो कुखुरीले यति धेरै अण्डा दियो कि बयान गरी साध्य छैन ।
मैले यू क्यान विन पुस्तक किनेर पढेको थिएँ । अहिले त्यही पुस्तकले देखाएको बाटोमा हिँडिरहेको छु ।
दिपेश कार्की, मोडल
मैले दसैंमा पाएको दक्षिणाले पहिलो पटक मासु किनेकी थिएँ ।
सानै हुँदाको कुरा हो । मैले मामाघरमा कति दक्षिणा पाएको थिएँ, त्योचाहिं याद छैन तर मैले त्यो पैसाले सिधै चलचित्र हलमा गएर चलचित्र ढुकढुकीको टिकट किनेको थिएँ ।
बाल्यकालको दक्षिणा चकलेट खाएरै सकिन्थ्यो । गत वर्षको दसैंमा १२ सय जति दक्षिणा उठेको थियो । त्यो पैसा फिल्मको टिकट किन्दैमा सकियो । पछि पपकर्न खाने पैसा चाहिँ आफैंले हाल्नुपर्‍यो ।
निर्जन थापा, मोडल
दसैंमा दक्षिणाभन्दा धेरै आशीर्वाद पाएर होला मेरो त दक्षिणा नै ओझेलमा पथ्र्यो । त्यसैले त्यस्तो महत्वपूर्ण कुरा किनेको सम्झना छैन । अलिकति भएको दक्षिणा साथीहरूसँग खाँदैमा ठिक्क हुन्थ्यो ।
मैले दसैंमा पाएको दक्षिणाले ममीलाई कपडा किनिदिएकी थिएँ ।
म सानो छँदा जहिले पनि दसैंको दक्षिणाबाट ककवाला पेस्तोल किन्थेँ । मलाई आर्मीमा भर्ती हुने ठूलो इच्छा थियो, तर चलचित्रमा आएँ ।
मैले दसैंमा पाएको दक्षिणाले पहिलो पटक ५ सय रुपैयाँको साइन्टिफिक क्यालकुलेटर किनेको थिएँ ।
मैले दसैंमा पाएको दक्षिणाले हातको औंलामा लगाउने एउटा औंठी किनेकी थिएँ ।
दसैंमा पाएको दक्षिणाले तिहारमा दाजुभाइहरूका लागि सामान किन्छु भने तिहारमा पाएको दक्षिणाले चाहिं आफूलाई चाहिएको सामान किन्ने गरेकी छु ।
बाल्यकालमा दसैंको दक्षिणाको ठूलो महत्व हुन्थ्यो । म दसैंमा मामाघरबाट प्रशस्तै दक्षिणा पाउँथें । त्यो दक्षिणाले मैले मिकासा कम्पनीको एउटा भलिबल किनेको थिएँ ।
मैले दसैंमा पाएको दक्षिणाले पहिलो पटक प्लास्टिकको चश्मा र घडी किनेको थिएँ ।
त्यसरी सामान किन्न सक्ने गरी दक्षिणा पाएको छैन । सबैतिरको जम्मा गर्दा बढीमा २ सयजति हुन्थ्यो । त्यो पैसा चकलेट खाँदैमा सकिन्थ्यो । त्यसैले दसैंमा पाएको दक्षिणाले नै अहिलेसम्म त्यस्तो स्मरणीय सामान किनेको छैन ।
मैले दसैंमा पाएको दक्षिणाले जिन्सको पाइन्ट किनेको थिएँ ।
स्कुल पढ्दा मामाले २ सय रुपैयाँ दक्षिणा दिनुभएको थियो । त्यसमा अलिकति पैसा थपेर मैले स्कुल ड्रेस सिलाएको थिएँ ।
महत्वपूर्ण कुरा किन्ने दक्षिणाचाहिँ कहिल्यै पाइएन । हार्मोनियम किन्ने ठूलो धोको थियो, हार्मोनियम किन्न दक्षिणाबाट आएको पैसाले कहिल्यै पुगेन ।
म करिब १२ वर्षको हुँदा मामाघरबाट पाएको दसैंको दक्षिणाले एक दर्जन स्केच पेनको प्याकेट किनेको थिएँ । मलाई सानोमा ड्रइङ गर्न खुबै मन लाग्थ्यो ।
मैले सानैमा मामाघरबाट पाएको दक्षिणाले धरान गएर ४ सय ५० रुपैयाँको चस्मा किनेको थिएँ ।
मैले आजभन्दा धेरै पहिले मामाघरबाट पाएको दसैंको दक्षिणाबाट ३० रुपैयाँको हातमा लगाउने घडी किनेको थिएँ ।
मैले ८ वर्ष पहिले दशैंमा पाएको दक्षिणा जम्मा गरेर गितार किनेको थिएँ ।